Mkpado: nzaghachi email | Martech Zone
Tag: nzaghachi email
KANA Express: Nlekọta Ahụmịhe Ndị Ahịa
Satọde, Satọdee 8, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị na-agwa ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na nnukwu ụlọ ọrụ na-ekpebi ịmaba n'ime usoro mmemme ọhaneze naanị ka ha wee hụ na ha ahụghị ihe ndị ahịa chọrọ ozugbo. Otu onye ahịa enweghị obi uto anaghị eche na ị mepere akaụntụ Twitter ma ọ bụ bipụta ibe Facebook maka azụmaahịa gị… ha ga-erite uru na ọkara iji rịọ ọrụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ nzukọ ọha, ị ga - enye ha ya. Ngwa ngwa. Nke a
Kwụsị iche na M Maara Gị!
Na Mọnde, Nọmba 22, 2011 Na Mọnde, Nọmba 22, 2011 Douglas Karr
Ọ dịkarịa ala otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu, ana m enweta ozi-e nke ejiri akọ rụọ, nke nwere ike ịkọwapụta, ma enweghị m otu isi ihe kpatara m ji anata email ma ọ bụ ụlọ ọrụ zitere ya. Ọ na-aga ihe dị ka nke a: Site na: [Ngwaahịa] Isiokwu: [Ngwaahịa] Version 2 wepụtara! Ndewo [Ngwaahịa] Onye ọrụ! Anyị na-na na ike na-arụ ọrụ na nke ikpeazụ ọnwa ole na ole redesigning [ngwaahịa]. Anyị ahụbeghị gị nwa oge na enwere mgbanwe ụfọdụ, ya mere
Adịghị m onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi. Abụghị m onye na-akwado "Eziokwu Na-adabaghị Adaba". A na-enyo data ahụ ma echere m na ọ bụ mpako mmadụ nke kwenyere na omume ọjọọ anyị na-egbu ụwa. Earthwa anọghị na nsogbu… ọ bụ ndị nọ. Ọ ga-amasị m ịkwọ ụgbọ ala elektrik, mana amaara m na ha anaghị arụ ọrụ nke ọma, mana, n'ikpeazụ, na-agba mmanụ ọkụ ọkụ. Ọ ga-amasị m ịkwọ ụgbọ ala nke na-eji mmanụ ụgbọ ala ndị ọzọ, mana ama m